Yan Aung: October 2007
မှတ်လောက်စရာ သင်ခန်းစာတွေ ထားရစ်ခဲ့သူ
ချွေးစေးပြန်စေတဲ့ တစ္ဆေအနမ်းတွေ ငါမလိုချင်တော့ဘူး
ငါဟာ နှင်းဆီတစ်ပွင့်ကို ရူးသွပ်ခဲ့ဖူးတယ်
ဒါပေမယ့် Calypso ရဲ့ ထောင်ချောက်ထဲမှာတော့ မကျနိုင်ခဲ့သေးပါဘူး
Odysseus ရဲ့ ခိုင်မာမှုတွေထက် မလျော့တဲ့ တည်ကြည်မှုတွေ
သိချင်ရင် Chain Saw တစ်လက်ယူခဲ့
ငါ့အသည်းနှလုံးမှာ Medusa ရဲ့ ၀ိညာဉ်ကိန်းအောင်းနေတယ်.
ငါ့ရဲ့ နှလုံးသွေးတွေ စီးကျလာတာ မင်းမြင်တဲ့ တခဏ
မင်းဘ၀တစ်ခုလုံး ထာဝရ ကျောက်သားပြင်ဖြစ်သွားမယ်
မင်းရဲ့ သေမင်းတမန် Reaper ဓားကြီးနဲ့ ငါ့ဘ၀ကို ဖျက်ဆီးနိုင်မယ်ထင်နေလား
အားသုံးတတ်တိုင်း တစ်ဖက်သားကို မနိုင်ဘူးဆိုတာ
Aikido သင်ဖူးသူတိုင်း သိတယ်.
တွေဝေခဲ့ဖူးတဲ့ ချစ်အိပ်မက်တွေ ငါ့မှာ မရှိတော့ဘူး
သွေးပျက်ခဲ့တဲ့ ညများကို အားနာလိုက်တာ
ရင်ဝကို အမုန်းဓားတစ်လက်နဲ့ ထိုးစိုက်ခဲ့ပေမယ့်
ငါဆိုတဲ့ ဒရက်ကူလာ ဆက်လက်ရှင်သန်နေမယ်.
မှင်စာလောက် မင်းအစွမ်းတွေနဲ့ ငါ့ကိုလာအံမတုနဲ့
မင်းရဲ့ ငယ်ထိပ်က မာနသွေးတွေကို ဖောက်ထုတ်ဖို့
Tarantula တစ်ကောင် ငါသိမ်းထားတယ်.
ဂုဏ်ဒြပ်တွေနဲ့ မိန်းမောနေတဲ့ ဘ၀တစ်ခုအတွက်
ငါ့ဘ၀ကို ချိုးနှိမ်ဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့ပေမယ့်လည်း
ဘယ်တော့မှ မသေတဲ့ Resident Evil ဟာ ငါပဲ…
T-Virus အတွက် ဆေးရှာလိုက်ပါဦးလေ
Total Extinctions တစ်ခု ကျရောက်တော့မယ်.
The Lost Book ရဲ့ နောက်ဆုံး Chapter မှာ
ရေတွင်းပျက်ထဲက မိန်းကလေးတစ်ယောက် လက်စွပ်တစ်ကွင်းနဲ့
ငါ့ကိုများ ကြုံကြိုက်လို့ တွေ့ခဲ့၇င် ထပ်သတ်နိုင်အောင်လေ…
ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ သရဲကားတွေလည်း ကုန်ပြီ. ဘာကျန်သေးလဲ. ဟတ်ဟတ်ဟတ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးအောင်ကြည်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း...
Peekaboo နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရေးခဲ့သမျှပို့စ်များ
(၁) Peekaboo ပို့စ်ခေါက်ခြင်း
(၂) Peekaboo Sidebar လုပ်ခြင်း
(၃) Peekaboo Navigation Bar လုပ်ခြင်း
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်က ကျွန်တော် Gtalk မှာ ခဏ၀င်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Chating လုပ်နေတုန်းမှာပဲ Gtalk ကနေ တစ်ယောက်က ခေါ်လာပါတယ်. ကျွန်တော်လည်း call ကို answer လုပ်ပြီး သူမှန်းမသိဘဲ တစ်ခြားတစ်ယောက်နာမည်နဲ့ ဆက်ပြောနေခဲ့ပါတယ်.
နောက်ကျမှ သူက ပြောပါတယ်
ကိုရန်အောင် လူမှားနေပြီတဲ့.. ကျွန်တော် စိုးထက်ပါ. တဲ့..
ကျွန်တော်လည်း အားနာလိုက်တာဗျာ. သူကလည်း သူပဲလေ. ဟဲလိုလုိ့တောင် မပြောဘူး မိတ်မဆက်ဘဲနဲ့ တစ်ခါတည်း စကားတွေ ဆက်ပြောသွားတော့ ကျွန်တော်လည်း တစ်ခြားမိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ လွဲမိတာပေါ့.
ထားပါလေ. အဲဒါနဲ့ပဲ ကိုစိုးထက်ကြီးနဲ့ စကားတွေ ဆက်ပြောဖြစ်ခဲ့ကြတယ်. ပထမဦးဆုံး အကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က ဘလော့ဂ်တွေပေါ်မှာ ရင်းနှီးခဲ့ကြတာ ကြာပြီလေ.
တကယ့်ကို မိတ်ဆွေရင်းတွေလိုပါပဲ. ရင်းရင်းနှီးနှီး ခင်ခင်မင်မင် စကားတွေ ပြောဖြစ်ခဲ့ကြတယ်.
ကျွန်တော့်ကို ကိုစိုးထက်ကြီးက အားမငယ်ဖို့၊ လူတွေတစ်မျိုးထင်ပေမယ့်လည်း ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာကို ဆက်လုပ်သွားနိုင်ဖို့ သွန်သင်လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်. ရွယ်တူသူငယ်ချင်းတွေ အချင်းချင်း ပြောသလိုမျိုး ပြောသွားခဲ့တာပါ. သူ့ဘ၀အကြောင်းလည်း အနည်းငယ် တီးခေါက်မိခဲ့ပါတယ်.
တစ်ခြားအကြောင်းတွေတော့ သိပ်မပြောလိုပါဘူးဗျာ. ကျွန်တော်သူ့ကို အထင်ကြီးလေးစားသွားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေထဲမှာ သူဟာ ပညာတော်သင်တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နေရင်း ကျောင်းတက်နေကြောင်း ဆိုတာ ပါလာပါတယ်.
ကျွန်တော်သာ သူ့နေရာမှာဆိုရင် အဲလိုနေနိုင်ပါ့မလားလို့တောင် မေးခွန်းထုတ်နေခဲ့မိတယ်. ပြီးတော့ ကိုစိုးထက်ကြီးက အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တယ်လေ. ဇနီးနဲ့ သမီးလေးကို ခွဲခွာပြီး အဝေးတစ်နေရာမှာ ဘ၀တက်လမ်းအတွက် ကြိုးစားနေရတဲ့ သူ့ဘ၀ကို ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်.
သူက ကျွန်တော်တို့ထက် အသက်ကြီးပေမယ့်လည်း လူငယ်တွေနဲ့ အတူတူ ဘလော့ဂါဘ၀ကို ခုံမင်မြတ်နိုးစွာ ရွေးချယ်ထားသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်. သူ့ရဲ့ ပညာတော်သင် အတွေ့အကြုံတစ်ချို့ကိုလည်း ဘလော့ဂ်မှာ ရေးသားဖော်ပြနေသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်.
ကဲဗျာ. လိုရင်း ဆွဲရရင်တော့ ဒီနေ့ သူ့သမီးလေး သံသာထက်ရဲ့ ၃ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မင်္ဂလာပါ.
အဝေးတစ်နေရာမှာ ရောက်နေတဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်ကို ကျွန်တော် အားမပေးတတ်ပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက်လေး သူတို့မိသားစုအတွက် ပျော်ရွှင်စရာလေးတစ်ခု ဖန်တီးပေးချင်ပါတယ်. ဒါကြောင့်လည်း ဒီပို့စ်လေးကို ရေးသားရင်း သမီးလေးသံသာထက်အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းလေး ခြွေလိုက်ပါတယ်.
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ. သမီးလေး သံသာထက်ရေ…..
ဦးဦးတို့ အားလုံး သမီးလေးအတွက် ဆုတောင်းပေးနေမယ်နော်…
ဒါကတော့ သမီးလေးအတွက် (၃) နှစ်မြောက်မွေးနေ့မင်္ဂလာသီချင်းလေးပေါ့...
အတွေးဆိုတာ ၀င်္ကပါတစ်ခုမှ မဖြစ်သင့်ခဲ့တာ
ေ၀၀ါးနေတဲ့ ငါ့အသိတွေမှာ နှိုင်းရတစ်ခုလိုနေတယ်..
အစားအသောက်တွေ ပေကျံနေတဲ့ မင်းနှုတ်ခမ်းအောက်က
မှောက်မှားနေတဲ့ သီအိုရီတွေနဲ့ ငါ့ကို သွေးမဆောင်ပါနဲ့
ဖောက်ပြားမှုအောက်မှာ ခရုသင်းသံ မသာယာနိုင်ဘူးလေ…
ငါလည်း မိသားစုတစ်ခုအတွက် ထီးတစ်လက်ဖြစ်ချင်တာပေါ့
ငါ့ထီးရဲ့ ပြင်ပမှာ မီးတွေတော့ မတောက်လောင်စေချင်ဘူး
မသေခင် ဒီအတ္တဘောကြီးကို လုပ်ကျွေးခဲ့ပြီး
သေရင်တောင် ငါ့ဝိညာဉ် လိပ်ပြာမသန့်ခဲ့ရင်
ရေးသားသူ .... အိမ့်ချမ်းမြေ့
ရေးသားသူ ... ရေခဲငှက်
ဒီနေရာမှာ စစ်မှန်ခြင်းရဲ့ အရိပ်သဏ္ဍာန်တွေ စိုးမိုးနေဆဲပါပဲ…
Freewill thinker တွေ၊ Out-of-the-box သမားတွေ၊
Communist တွေ၊ Democratic တွေ၊
Liberal ၀ါဒီတွေ၊ Extremist တွေ၊
ဒီနေရာမှာ စစ်မှန်ခြင်းရဲ့ ၀တ်ရုံလွှာတွေ ကခုန်ခဲ့ဖူးပါတယ်…
ဒီနေရာမှာ စစ်မှန်ခြင်းရဲ့ မကိုဋ်တော်တွေ ဦးမော့နေဆဲပါပဲ…
ခပ်တိုးတိုးနေရင် တွယ်တာသံယောဇဉ်တွေ မှောင်အတိကျကုန်မှာမို့လို့ပါ....
သိမ်ဖျင်းဝါစာ = ယုတ်ညံ့သော စကား
မုခ = မျက်နှာ
အတိဇာတ = မိဖထက် ပညာဥာဏ်၊ ဥစ္စာ၊ ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မြတ်သော သား
သမ္မာစရိယ လင်္ကာတော် (၁) ကို ဒီမှာဖတ်ပါ.
စိုးရွံ့နေတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ငိုကြွေးသံတွေက
ပေတစ်ရာလမ်းမကြီးပေါ်က သွေးစက်တွေကို တရှိုက်မက်မက်ပွေ့ဖက်နေကြလေရဲ့.
၀ါးရင်းတုတ်တွေ၊ နံပါတ်တုတ်တွေကိုင်ဆောင်ထားကြတဲ့ စစ်မိစ္ဆာကောင်တွေ…
ရတနာသုံးပါးနဲ့ ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးကို မပြစ်မှားရကောင်းမှန်းမသိတဲ့ လူ့ဗာလတွေ
ကိုယ့်လုပ်ရပ်မှန်မှားမခွဲခြားနိုင်ဘဲ တစ်ဘ၀တာရပ်တည်မှုအတွက် မောဟတိမ်သလ္လာလွှမ်းခြုံထားသူတွေ…
နဖူးပေါ်လက်တင်လို့ ဖူးမြော်ရှိခိုးလက်စုံမိုးထိုက်တဲ့ ဘုရားသားတော်တွေပါ
မင်းစိတ်ထဲမှာ မကွယ်ဝှက်ဘဲသိနေတဲ့ အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ပြီး
မင်းမျက်စိတွေလည်း ဘယ်တော့မှ ပွင့်မှာမဟုတ်ဘူး
တိုင်းလုံးပြည်သိ ဘုရားပေါ် ဖိနပ်မစီးရေး သပိတ်မှောက်ခဲ့စဉ်က
အဲဒါ တို့ဗမာကွလို့ ကြွေးကြော်ခဲ့သဟာတွေ
နယူးယောက်မြို့ရှိ ဦးဥာဏ်ဝင်းတည်းခိုနေထိုင်ရာ ဟိုတယ်ရှေ့မှ ဆန္ဒပြပွဲ
နအဖစစ်အာဏာရှင်အစိုးရရဲ့ ရက်စက်မှုတွေကို ဒီမှာကြည့်ပါ.
GlobalVoicesOnline ကလည်း မြန်မာဘလော့ဂါတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုလေပြီ...
မြန်မာလူငယ်ဘလော့ဂါတွေ နအဖကို ဘယ်လိုတော်လှန်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုအကြောင်းကို GlobalVoicesOnline.org မှာ ရေးသားဖော်ပြထားတာကို မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ဖတ်မိပြီး လင့်ခ်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်. အဲဒါကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ.
Media Campaign ကို ကျယ်ပြန့်သည်ထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်အောင် လုပ်ဆောင်ကြပါစို့လို့် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်.
မြစ်ထဲမှာ မျောပါနေသည့် သံဃာတော်တို့၏ ရုပ်ကလာပ်များ
နအဖ လက်ကိုင်တုတ်များ ပစ်ခတ်၊ ရိုက်နှက် သတ်ဖြတ် မှုကြောင့် ပျံလွန်တော်မူ ခဲ့ရသည့် သံဃာတော်များ၏ ရုပ်အလောင်းများအား ဖျောက်ဖျက် နေကြောင်း ရန်ကုန်မှ ပေးပို့လာသည့် သတင်းများ အရ သိရှိရပါသည်။
ကားနံပါတ် (စ/၇၂၇၀) ဒိုင်နာ အမျိုးအစား မော်တော်ကားဖြင့် အလောင်းများကို သယ်ယူသွားပြီး ရန်ကုန်မြစ်ထဲမျှောချလိုက်ကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများမှ အတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါသည်။ ဆုံဆည်းရာမှ ၂၈ ရက်နေ့က တင်ခဲ့သည့် သတင်းဖြစ်ပါသည်။ အခု ဓါတ်ပုံက ၃၀ ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြစ်ထဲက သံဃာတော်အလောင်းများ တွေ့ရှိရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗွီဒီယိုကိုတော့ www.abcnews.go.com (ကြည်ရှုလိုပါက နှိပ်ပါ) မှာ သွားရောက် ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျား....
Download Audio File: အသည်းနာကမ္ဘာမကြေ(မာမာအေး)